Guddoonka Baarlamaanka oo War kasoo saaray Muranka ka taagan Maqaamka Muqdisho (dhegayso) – Radio Daljir
Janaayo 21, 2018 9:48 b 0
Gudoonka Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Somaliya ayaa goordhow ka hadlay Khilaafka Siyaasadeed ee Kajira Muqdisho iyo arinta maqaamka Caasimada.
War Saxaafadeed ka kooban 5 Qodob oo ay soo saareen Gudoonka Golaha Shacabka ayey ku sheegeen in tan iyo markii uu xirmay Kalfadhigii 2-aad ee Baarlamaanka ay isa soo tarayeen fariimaha ka imanaya Shacabka ee xambaarsan walaac saameyn ku yeelan karta midnimada qarabnka, Faritaanada Dastuurka lagu heshiiyay iyo Xasiloonida Siyaasadeed ee dalka.
Golaha Shacabka oo ku jira Fasixiisa dastuuriga ah ayaa Kulan gaar ah ka yeeshay Gudoonka Golaha Shacabka arinta maqaamka Caasimada oo mudooyinkan buuqeeda banaanka usoo baxay.
Gudoonka Golaha Shacabka ayaa sheegay in lagama maarmaan ay tahay in si wadajir ah looga hortago waxyaabaha keeni kara Xasilooni daro Siyaasadeed iyo Khilaafaad dastuuri ah oo dib udhac kale ku keena habsami usocodka howlaha culus ee horyaala golayaasha iyo Xafiisyada dastuuriga ah ee Dalka.
Xuseen Madar Warbixintan inoo diyaariyaay